အဆိုပါဥပဒေ: သဘောတူညီချက်များ၏အသက်အရွယ်ကွာခြား, ဂရုစိုက် | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ ဥပဒေ သဘောတူညီခကျြ၏ခေတ်
ယနေ့မည်သူမဆိုအတွက်အကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာလိင်ဆိုင်ရာသဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုနားလည်ခြင်းဖြစ်သည်။ မိဘများ၊ ကျောင်းများ၊ လူငယ်များနှင့်တရား ၀ င်အာဏာပိုင်များသည်ဆယ်ကျော်သက်များအား ၁၆ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အကြားလုံခြုံစွာသွားလာနိုင်ရန်ကူညီရန်လိုအပ်သည်။ ဤဇုန်တွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်တရားဝင်ဖြစ်သော်လည်းဝတ်လစ်စလစ်ဓါတ်ပုံများကိုမျှဝေခြင်းမပြုပါ။ အင်တာနက်နည်းပညာသည်လိင်မှုဆိုင်ရာနှိုးဆွသောရုပ်ပုံများကိုကလေးများအပါအ ၀ င်စမတ်ဖုန်းရှိသူမည်သူမဆိုရရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ လိင်ရာဇဝတ်မှု 53% တက်ဖြစ် စကော့တလန်အစိုးရမှထုတ်ပြန်သော ၂၀၁၅-၁၆ ကိန်းဂဏန်းများအရ ၂၀၀၆-၇ ခုနှစ်မှစ၍ ဤကြီးမားသောတိုးတက်မှုသည်အင်တာနက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာခြင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်နေသည်။
အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများအပေါ်ဥပဒေပြဌာန်း အင်္ဂလန်နှင့်ဝေလနယ် နှင့် စကော့တလန် 18 နှစ်ပေါင်း၏အသက်အရွယ်သည်တိုင်အောင်, လူငယျတစျယောကျ "ကလေးတစ်ဦး," နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏လိုအပ်ချက်အတွက်စဉ်းစား။
သို့သော်လိင်ဆက်ဆံဘို့သဘောတူခွင့်ပြုချက်များ၏အသက်အရွယ် 16 နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ အတော်များများကမြီးကောင်ပေါက်လိင်များအတွက်သဘောတူညီခကျြ၏အသက်ကျော်ဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း, သူတို့ကခေါ်ဆောင်သွား selfies ယူ. သူတို့အသက် 18 ခုနစ်နှစ်ဖြစ်ပါ၏သည်အထိသူတို့ကိုပေးပို့ဖို့ပညတ်တိကခွင့်မပြုဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ကြပါဘူး။ သဘောတူညီချက်မပါဘဲ '' ကလေးတွေ '' ၏ဓါတ်ပုံများ၏အပိုင်တရားမဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ 13 အောက်မှာတစ်ဦးကကလေးမဆိုအခြေအနေအရ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမဆိုပုံစံသဘောတူဖို့တရားဥပဒေဆိုင်ရာစွမ်းရည်မရှိပါ။
ဒီဧရိယာ၌ပညတ်တရားသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူတို့သညျသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ဘယ်သူပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းအတွက်ကလေးငယ်များပါဝင်မှရှာအံ့သောငှါရှိသည်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြသည်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူကလေးများမြောကျမတို့အတွက်အတိုးနှင့်အတူအမျိုးသမီးများ၏ငယ်အချိုးအစားဖို့လျှောက်ထားရန်အဓိကအားရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပညတ်တရားကို အင်္ဂလန်နှင့်ဝေလနယ်တို့မှ“ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်ကလေးများသည်အဓိကအားဖြင့်အလွဲသုံးစားမှုခံရသူများဖြစ်ပြီး၊ သူတို့ကိုအမြတ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်အမြတ်ထုတ်သောကလေးများသည်မတရားပြုကျင့်သူများဖြစ်သည်။ ”
အခုတော့ '' ကလေးက '' ၏တင်းကျပ်သောအနက်ကိုနည်းပညာအသစ်များ၏အကူအညီဖြင့်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိချင်စိတ်စူးစမ်းဆယ်ကျော်သက်, လေးနက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုခံရနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
သူတို့က, အပါတီများအကြားအသက်အရွယ်ကွာခြားချက်အဖြစ်အကောင့်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအချက်များသို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်သူတို့၏ဆကျဆံရေး၏သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်. အတွင်းပါတီများအကြားကွာခြားမှုနှုန်းယူပါလိမ့်မယ်။
အင်္ဂလန်မှာ 2014 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးကျောင်းသူလေးသူမရဲ့ရည်းစားမှသူ့ကိုယ်သူတစ် topless ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုပေးပို့ပြီးနောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ သူကနောက်ပိုင်းမှာသူနဲ့မိန်းကလေးစုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်စဲပြီးနောက်သူ၏အဆွေခင်ပွန်းဖို့ပုံရိပ်ကိုပေးပို့ပြီးလျှင်တစ်ဦးသတိပြုဖို့လိုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အသစ်ဥပဒေ, ကြမ်းတမ်းအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာမှုအက်ဥပဒေ, 'revenge porn' နှင့်ဆက်ဆံသည်။ သီးခြားစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ လက်စားချေ porn ထိုသို့ပေါ်မှာ။
ဒီမှာပြဿနာသဘောတူညီခကျြ၏မရှိခြင်းသို့မဟုတ်ဖောက်ဖျက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုမှတစ်ဦးက '' သုညသည်းခံစိတ် '' ချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာတရားစွဲဆိုမှုအာဏာပိုင်များနှင့်ဗြိတိန်အတွက်ရဲကမွေးစားခဲ့ကြပုံပေါ်သည်။